Romana 15: 1-33
Romana 14 Romana 15 Romana 16
Fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika hananantsika ny fanantenana ny amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny Soratra Masina.
Fa Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana anie hampiray hevitra anareo araka an'i Kristy Jesosy.
Koa mifandraisa hianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy anareo koa ho voninahitr'Andriamanitra.
Fa lazaiko fa Kristy efa tonga mpanompon'ny voafora noho ny fahamarinan'Andriamanitra hahato ny teny fikazana tamin'ny razana,
mba hankalazan'ny jentilisa an'Andriamanitra koa noho ny famindrampo, araka ny voasoratra hoe: Izany no hiderako Anao any amin'ny jentilisa sy hankalazako ny anaranao (Sal. 18. 49).
Ary hoy koa Izy: Miravoravoa ry jentilisa, mbamin'ny olony (Deo. 32. 43).
Ary koa: Miderà an'i Jehovah, ry jentilisa rehetra, Ary aoka hankalaza Azy ny firenena rehetra (Sal. 117. 1).
Ary hoy koa Isaia: Hisy solofon'i Jese, Dia Ilay hitsangana hanapaka ny jentilisa: Izy no hitokian'ny jentilisa (Isa. 11. 10).
Fa izaho koa, ry rahalahiko, dia matoky ny aminareo fa feno fahatsarana hianareo, dia feno ny fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa.
Fa tsy sahiko lazaina izay zavatra tsy nampanaovin'i Kristy ahy, na tamin'ny teny, na tamin'ny asa, mba hampanaiky ny jenitilisa,
dia tamin'ny herin'ny famantarana sy ny fahagagana, ary tamin'ny herin'ny Fanahy Masina, dia hatrany Jerosalema ka manodidina hatrany Ilyrikiona, no nahatanterahako ny fitoriako ny filazantsaran'i Kristy.
Fa ankehitriny, satria tsy misy antony intsony ny itoerako amin'ireto, sady efa naniry hatramin'ny taona maro hankany aminareo aho,
Fa efa sitrapon'i Makedonia sy Akaia ny hamory vola hiantrana ny malahelo amin'ny olona masina any Jerosalema.
Eny, sitrapony izany, sady mpitrosa aminy izy. Fa raha ny jenitilisa no niombona ny zava-panahy taminy, dia tokony hanompo azy koa amin'ny zavatra momba ny nofo izy.
Ary fantatro fa raha mankany aminareo aho, dia homba any ny fahafenoan'ny fitahian'i Kristy.
mba ho voavonjy amin'ny tsy mino any Jodia aho, ary mba hankasitrahan'ny olona masina izay fanompoana hataoko ny Jerosalema,
mba hankanesako any aminareo amin'ny fifaliana, raha sitrapon'Andriamanitra, ka samy ho vavolombelona ny fontsika.